PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-09-17 - Ufisa ukuba isibonelo kwabezayo
Ufisa ukuba isibonelo kwabezayo
Isolezwe ngeSonto - 2017-09-17 - EZEMIDLALO - SIBUSISO MDLALOSE noNJABULO NGIDI
NOZINTI wokuqina weMamelodi Sundowns neqembu lesizwe lase-Uganda, uDenis Onyango, kulindeleke aphinde akhiphe amangwevu akhe uma iSundowns isibhekene neWydad Casablanca yaseMorroco kwi-quarterfinal yomlenze wokuqala yeCaf Champions League.
Lo mdlalo okufanele iDowns iqinisekise ukuthi izivakashi azilitholi igoli uzodlalelwa eLucas Moripe Stadium, e-Atteridgeville, namuhla (ngeSonto) ngo-3 ntambama.
Lo nozinti kuzobekwa amathemba kuye nje angase aqophe omunye umlando namaCranes kwazise ifomu yakhe iwabeke ethubeni elihle lokuzibekisela indawo okokuqala kwiNdebe yoMhlaba ka-2018 ezodlalelwa eRussia ngonyaka ozayo. Umlenze wesibili weDowns naleli qembu laseMorocco eselinqobe ka-19 izicoco zeligi uzodlalelwa eStade Mohamed V, eMorocco, ngoMgqibelo ozayo.
“Njengoba ngathweswa umqhele wokuthi ngingunozinti ohamba phambili e-Afrika kusemahlombe ami ukuthi ngiqinisekise ukuthi ngihlale ngilicokamisa izinga. Ngisho neSundowns inenselelo efanayo yokuthi iyibambe ishisa ukuze ivikele isicoco.
“Nginesicoco esisodwa seChampions League njengamanje.
“Noma ngubani angiyinqoba iChampions League, kodwa kwehlukile ukuyinqoba amahlandla amabili noma amathathu kulandelana, kungagcini lapho uphinde ube ngumdlali ohamba phambili e-Afrika,” kusho u-Onyango.
“Yikhona-ke manje esengikuphokophele ukukuzuza maqede ngidlale okokuqaka kwiNdebe yoMhlaba.
“Ngifuna ukushiya umsizilo ozokwenza isizukulwane esisha sibhukule siwulangazelele ngomdlandla ukuwulandela.”
Lo nozinti okleliswe phakathi kwamakati onozinti abayishumi abayizinkalimeva emhlabeni jikelele ngo-2016 ngokweInternational Federation of Football History and Statistics uzongena kulo mdlalo enokuzethemba
Ungemuva kokusiza i-Uganda iguqise i-Egypt ngo 1-0 emlenzeni wesbili.
Ngisho emlenzeni wesibili abashaywe kuwo ngo 1-0 wenze umsebenzeni oncomekayo evimba amabhola amabili abethunyelwa uMohamed Salah ogijima kwiLiverpool yase-England.
Ukunqoba kwe- Uganda iPharaohs akugcinanga nje kuphela ngokubeka amaCranes ethubeni eliyingqayizivele lokuzibekisela indawo eNdebeni yoMhlaba okokuqala emlandweni wawo, njengoba umlando uveza ukuthi bekungokokuqala leli zwe liguqisa i-Egypt kusukela ngo-1965.
Ngenxa yokuzimisela kwakhe uma esezintini u-Onyango uqokwe njengonozinti ovelele ku-Absa Premiershipngesizini ka-2015/2016, waphinde waqokwa njenge-African Player of the Year - based in Africa ngo-2016.
Akagcinanga nje ngokuhola ngempumelelo iqembu lakhe iMamelodi Sundowns lidla isicoco seCaf Champions ngo-2016, kodwa futhi uphinde wahola ngempumelelo amaCranes azibekisele indawo okokuqala ngemuva kweminyaka engu-38 kwi-Afcon ebiseGabon ekuqaleni kwalo nyaka.
Khonamanjalo ngoLwesihlanu emdlalweni weCAF Confederation Cup obuseLucas Moripe Stadium iSuperSport United ibambane ngo 0-0 neZesco United yaseZambia.
Sisekuzo ezase-Afrika namuhla iBanyana Banyana izodudulana neBotswana kwiCosafa Women’s Championship edlalelwa KwaBulawayo, eZimbabwe. Umdlalo weBanyana neBotswana uqala ngo
4.30 ntambama. IBanyana ifinyelele kuleli zinga ngemuva kokwehlula iNamibia ngo 3-1 ngoLwesihlanu.
UKUNGANGENELWA goli kweMamelodi Sundowns yinto engamshiya esese uDenis Onyango nozakwabo emuva komdlalo wanamuhla Isithombe: BACKPAGEPIX